မောင့် စိတ် တိုင်း ကျ – Hlataw.com
ကျမနာမည် က ဇင်ဇင်ပြုံးပါ..။ သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ..။ ရင်အုံကြီးကြီး ၊ တင်သားထွားထွား နဲ့ မြင်ရတဲ့သူ ဘဝင်ဆူ သွားရစေတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့သူပါ..။ ကျမအသားက ခပ်ညိုညိုနဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ခပ်တောင့်တောင့်ပါ..။ သူများတွေက ပြောကြတယ်လေ..။ ကျမကိုယ်ခန္ဓာက ဆူဖြိုးကျစ်လစ်လို့ ဖုထစ်မို့မောက်နေရမယ့် နေရာတွေက ဖုထစ်မို့မောက်နေသတဲ့ ရှင်ရယ်..။ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားက ပြောရရင်တော့ အရပ်က ၅ ပေ မပြည့်တပြည့် ရင်က ၃၉ ၊ ခါးက ၃၀ ၊ တင်က ၄၀ ရှိတယ်ရှင့်..။ ကျမရဲ့ ဖင်ဆုံအိုးကြီးတွေက ထွားထွားပြည့်ပြည့် တင်းတင်းကားကား ဖြိုးဖြိုးအိအိကြီးတွေပါ..။ ကျမ လမ်းလျှောက်သွားရင် ကျမဖင်ဆုံအိုးကြီးတွေ အချက်ကျကျနဲ့ အနိမ့်အမြင့် လှုပ်ရှားနေပုံတွေက မြင်ရသူ ပုရိသယောက်ျားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမရိုးမရွ ဖြစ်စေတာပေါ့ ရှင်..။ သူတို့ရဲ့ ကိလေသာရာဂမီး ရမ္မက်တွေကို ပိုပိုပြီး ထကြွစေတာပေါ့ ရှင်..။ ကျမရဲ့ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကလည်း ဝိုင်းဝန်းမို့မောက်ပြီး တင်းတင်းရင်းရင်း ဝင်းဝင်းအိအိ ရှိနေတယ်..လေ.။ ဒီတော့ ကျမကို တွေ့တဲ့သူတိုင်းက စိတ်မထပဲ နေပါ့မလား ရှင်..။ ကျမလမ်လျှောက်သွားရင် ကျမကိုကြည့်ပြီး အားရကျေနပ်ကြတဲ့ မျက်နှာတွေ စိတ်ထဲမှာ ကာမမီးတောက် တောက်လောင်နေတဲ့ မျက်နှာတွေ၊ ကျမကို ကစ်ချင်ကြတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ အမြဲကြုံတွေ့ နေရပါတော့တယ်…ရှင်..။ ကျမက အခု အသက် ၂၅ နှစ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အပျိုလေးပေါ့ ရှင်..။ အပျိုပေမယ့်လည်း ရည်းစား၃ယောက် ပြောင်းခဲ့ပြီးပါပြီ..။ ပထမ ရည်းစားက အသားခပ်လတ်လတ်နဲ့ ချောမောတဲ့ သူပါ..။ မောင်ကျော်လို့ ခေါ်ပါတယ်..။ သူနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တာ ကျမ အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းကပါ..။ စိတ်ကစားပြီး ရည်းစားထားမိတာပါ…။ ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်း ပထမ နှစ်ဝက်လောက်ပဲ ခံပါတယ်..ရှင်..။ နှစ်ယောက်သား ပြတ်စဲခဲ့ရပါတယ်..။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျမရဲ့ ရှက်တတ် ကြောက်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကြောင့်ပေါ့..။ ကျမဆယ်တန်း စတက်တဲ့နှစ်မှာ သူနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး ရင်ခုန်ခဲ့ကြတာပေါ့…။ ကျမရဲ့ ကျောင်းသွား၊ ကျောင်းပြန်ကို လမ်းထိပ်မှာ စောင့်စောင့်ပြီး ကြည့်တတ်တယ်လေ..။ နောက်တော့ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီး ကျမကို စာပေးပါတယ်..။ တစ်လလောက်ကြာတော့ ကျမလည်း စာပြန်လိုက်တော့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားရတာပေါ့ ရှင်..။
ချစ်သူဖြစ်တယ် ဆိုပေမယ့် ဘယ်သူမှ မရိပ်မိပါဘူး ရှင်..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာပေးစာယူ လုပ်တဲ့အခါ ကျမရဲ့ ကျောင်းစာသင်ခုံထဲမှာ ထည့်ထည့်ပြီး ပေးလိုက် ယူလိုက် လုပ်တာမို့ ဘယ်သူမှ မသိဘူးလေ..။ တစ်နေ့တော့ ကျောင်းကို အစောကြီး လာခဲ့ပါဆိုတာနဲ့ ကျမ အခန်းထဲ ရောက်သွားတော့ သူကကြိုပြီး စောင့်နေတယ်လေ..။ ကျမမှာ သူနဲ့ စကားပြောရမှာ ရှက်ကြောက် နေတာပေါ့..။ သူက ကျမနားကပ်ပြီး လက်ကလေးကို ကိုင်တယ်..။ ကျမက ရုန်းတယ်..။ သူက မရဘူး…ကျမကို ဖက်ပြီး ကျမပါးပြင်ကို နမ်းတယ်..။ ကျမမှာ ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ် တွေကြောင့် စိတ်ဆိုးမိတယ်..။ သူ့ကိုတွန်းပြီး အခန်းအပြင်ထွက်လို့ အိမ်ပြန်လာခဲ့မိတယ်..။ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ တောင်းပန်စာတွေ ရပေမယ့်လည်း ကျမ အနမ်းခံရမှာ ကြောက်သွားတယ်လေ..။ သူနဲ့ ပြန်မဆက်သွယ် ဖြစ်တော့ဘူး..။ ဒါနဲ့ သူလည်း နောက်ဆုတ်သွားတယ်…။ အဲဒါက ကျမရဲ့ ပထမဆုံး ရည်းစား အတွေ့အကြုံပေါ့ ရှင်..။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ တက္ကသိုလ်ရောက်မှ တွေ့တာပါ..။ သူ့နာမည်က ကိုမြင့်သန်းတဲ့ ..။ သူနဲ့လည်း ရည်းစားဖြစ်တာ သိပ်မကြာပါဘူး ကျမတက္ကသိုလ်တက်ပြီး မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲမှာ တွေ့ခဲ့ရတာ..။ ကိုမြင့်သန်းက လူပုံသန့်သန့်၊ အရပ်ရှည်ရှည် နဲ့ အဝတ်အစားကိုလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်တတ်တယ်…။ ကျမနဲ့ ကိုမြင့်သန်းတို့ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲမှာ တွေ့ပြီးတော့ မျက်မှန်းတန်းမိလို့ ခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ်.. လမ်းမှာတွေ့တိုင်း နှုတ်ဆက်ပြုံးပြကြတယ်..။ နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီး ကျမကို ရည်းစားစကား ပြောတယ်..။ ကျမကလည်း တက္ကသိုလ် ရောက်ပြီဆိုတော့ ဝတ္ထုတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့ အတိုင်း ရည်းစားလေးထားပြီး နေကြည့်ချင်တာနဲ့ ကိုမြင့်သန်း အချစ်ကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်..။ တက္ကသိုလ်မှာ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ကျမ ယှဉ်တွဲလျှောက်ပြီး ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လုပ်တယ်..။ နှစ်ယောက်သား အတူတူ မုန့်ဆိုင်ထိုင်တယ်..။ ရည်းစားသက်တမ်း တစ်လလောက်ကြာတော့ သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ဖို့ ပြောတယ်..။ ပထမရည်းစားနဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ရှက်ရွံ့မိပေမယ့် ကိုမြင့်သန်း နမ်းလာရင်တော့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲ ခံလိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားမိပါတယ်..။ သစ်ပင်အောက် ထိုင်တဲ့ စုံတွဲတွေကို တွေ့မြင်ရတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပူးပူးကပ်ကပ်ထိုင်ပြီး လက်ကလေးကိုင်လို့ နမ်းရှုံ့နေကြတာပဲ တွေ့နေရတာ မဟုတ်လား..။
ဒီတော့ သမီးရည်းစားဆိုတာ ဒီလိုဘဲ နမ်းရှုံ့တာပဲလို့ ဖြေတွေးလေးတွေးပြီး သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်..။ ပထမတော့ ကျမနဲ့ ကိုမြင့်သန်း သစ်ပင်အောက်မှာ စာရွက်လေးတွေ ကိုယ်စီခင်းပြီး ထိုင်ကြတယ်..။ ကိုမြင့်သန်းက ကျမလက်ကို ကိုင်ထားပြီး စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ပြောကြတယ်..။ စကားပြောရင်နဲ့ ကိုမြင့်သန်းက ကျမပုခုံးပေါ် လက်တင်ပြီး ဖက်လာတယ်..။ နောက်ကျမရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်ကို အနမ်းမိုးတွေ ရွာချလိုက်တယ်..။ ကျမ ရှက်ရွံ့ပေမယ့်လည်း လိုက်လျောပါတယ်။ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ပါးပြင်ကိုတောင် ကျမ ပြန်နမ်းလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုမြင့်သန်းက ကျမပါးပြင်ကို နမ်းရုံတင် မဟုတ်တော့ဘူး..။ ကျမနှုတ်ခမ်းကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ နမ်းစုတ်လိုက်တယ်..။ ကျမမှာက နိုင်ငံခြားခွေထဲမှာ မြင်ဖူးနေပြီဆိုတော့ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်နမ်းတာကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်..။ ဘာဓါတ်လဲတော့ မသိပါဘူး ရှင်..။ အဲဒီလို ကိုမြင့်သန်းက ကျမကို နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ လျှာဖျားလေးကို ကျမပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး ကလိတော့ ကျမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲက တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်သွားရပါတယ်..ရှင်..။ အဖုတ်ကလေး ယားကျိကျိ ဖြစ်သွားပါတယ်…။ ကိုမြင့်သန်းက သူ့ရဲ့အနမ်းမှာ ကျမ မျောသွားပြီဆိုတာ သိလို့နဲ့ တူတယ် ကျမကိုယ်လုံးကို လက်တစ်ဖက်က ဖက်ထားပြီး လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့ နို့အုံလေးကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ရွစိရွစိ လုပ်ပေးတယ်. ကျမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲမှာ စစ်ခနဲ စစ်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ ကျမမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလောက်တော့ လိုက်လျောသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်လေ……။ ဒါကြောင့်မို့ ကျမ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ကျောပြင်ကို ပြန်ဖက်ပြီး သူ့ရဲ့ အနမ်းနဲ့ နို့တွေကို ကိုင်ဆုပ်နေတာတွေကို ခံစားနေမိတယ်..။ အဲဒီလို ကျမလက်က သူ့ကျောကို ဖက်ထားရာက ပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို လက်နဲ့ တိုက်မိသွားပါတယ်..။ ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ထောင်ထနေတဲ့ မာမာအချောင်းကြီးကို လက်နဲ့ ထိလိုက်မိတော့ လန့်ပြီး ကိုမြင့်သန်းရဲ့ ကျောကို ပြန်ဖက်ထား လိုက်မိပါတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုမြင့်သန်းက ကျမရဲ့ နို့အုံကို ကိုင်ထားတဲ့လက်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို လက်ရွှေ့ပြီး နှိုက်လိုက်ပါတယ်..။ ကွက်တိပါပဲ ရှင်..။ ကျမရဲ့ တရွရွနဲ့ ဖောင်းကြွနေတဲ့ အဖုတ်အုံလေးကို လက်နဲ့ စမ်းမိသွားတော့တယ်..။ ကျမမှာ နဂိုက ရှက်ရွံ့စိတ်ကလေး ပြန်ပေါ်လာတယ်..။
ဒီလောက်တောင် ကျမဖက်က အခွင့်အရေး ပေးထားရက်သားနဲ့ မကျေနပ်ပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နယ်ချဲ့လာတာကို စိတ်ဆိုးမိတယ်..လေ…။ နို့ကလေး ကိုင်ရုံ ၊ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ရုံဆိုရင် တော်ပြီပေါ့..။ ကျမရဲ့ ရှက်ရွံ့စိတ်ကနေ ဒေါသစိတ်ဖြစ်လို့ သွားပါတယ်..။ ကိုမြင့်သန်း ရင်ခွင်ထဲကနေ ကျမလူးလဲထပြီး ပြန်လာခဲ့ ပါတော့တယ်..။ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လို့ နောက်ကို ကိုမြင့်သန်း အနားကပ်လာရင်တောင် လက်မခံချင် တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ကျမ လမ်းခွဲခဲ့တာပါပဲ..ရှင် ။ ကိုမြင့်သန်းကတော့ အမျိုးမျိုး လိုက်ချော့ပါတယ်..။ ကျမကတော့ ရှက်ရွံ့တဲ့စိတ် ၊ကြောက်တဲ့စိတ်၊ ဒေါသဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ လုံးဝလက်မခံ တော့ပါဘူး။ နောက်တော့ ကိုမြင့်သန်းလည်း ယောက်ျား သိက္ခာကျသလို ဖြစ်လို့လား မသိဘူး။ အခြားမေဂျာက ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ထပ်တွဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျမရှေ့မှာတင် တစ်ယောက်ပုခုံး တစ်ယောက်ဖက်လို့ လျှောက်သွား နေတယ်လေ။ ကျမကတော့ ကျိတ်ပြီး ဒေါသဖြစ်ရတာ ပေါ့ရှင်။ တော်ပါပြီဆိုပြီး ကျောင်းစာကိုပဲ လေ့လာကျက်မှတ် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက ဒုတိယရည်းစား ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြီး ကွဲသွားရတဲ့ အဖြစ်တွေပါ…။ ကျမအနေနဲ့ အဲဒီအချိန်က ဘာဆိုဘာမှ မသိသေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တော့လည်း ရှက်ကြောက် စိတ်တွေကြောင့် ဖြစ်သွားရတာ မဟုတ်လား။ ကျမကိုယ်၌ကလည်း ကိုမြင့်သန်းကို နှစ်နှစ်ကာကာ မချစ်တာလဲ ဖြစ်မှာပါလေလို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြေတွေးမိပါတယ်။ ကိုမြင့်သန်းအနေနဲ့ တခြားမိန်းခလေးနဲ့ တွဲသွားနေတာကို ကျမစိတ်ထဲ မနာလို ဝန်တိုစိတ် ကလေးတောင် ဖြစ်ခဲ့တာမှာ မဟုတ်ပဲလေ…။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျမ တက္ကသိုလ် စတက်တဲ့ နှစ်မှာပဲ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ချစ်ပြီး ခွာပြဲခဲ့လို့ ကျမဟာစာကိုပဲ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကျမကို စိတ်ဝင်စားပြီး ချစ်လို့စကား လိုက်ပြောတဲ့ သူတွေကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ပဲ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ နေပြီး စာကိုပဲ အားထုတ်ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်..။ ကျမ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာတဲ့ သီတာတို့ ၊ မေလဲ့တို့နဲ့ ငယ်ပေါင်း ကြီးဖော်တွေလို ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်းတွေလို ပေါင်းသင်းခဲ့ပါတယ်..။ သူတို့အိမ်တွေကို ကျမလိုက်လည်လို့ ကျမရဲ့ အိမ်ကိုလည်း သူတို့က လိုက်လည်ရင်း စားအိမ်သောက်အိမ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
ကျမအနေနဲ့ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လို ရည်းစားထပ်ပြီး ထားရမှာ ထိတ်လန့်နေတဲ့ အချိန်မှာ သီတာတို့ မေလဲ့တို့ကတော့ အတွဲတွေ ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့ရှင်။ ကျမနဲ့ ကိုမြင့်သန်းတို့ သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး ကွဲသွားကြတာကိုတော့ သူတို့သိထား ကြတယ်။ အကြောင်းရင်းကိုတော့ ကျမ မပြောပြတော့ သူတို့မသိကြပါဘူး။ စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ပဲ ဆိုပြီး ပြောထားရတာပေါ့။ သီတာတို့ မေလဲ့တို့ကတော့ ကျမလို မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ ဘွင်းဘွင်းနဲ့ ရှင်းရှင်းသမားတွေ..။ သူတို့ရည်းစားနဲ့ ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကအစ ပြောပြကြတယ်…ရှင့်.။ ကျမမှာ သူတို့ပြောစကား ကြားရတာ နားရှက်လိုက်တာရှင်။ ဒါပေမယ့် နားမထောင်လို့က မရတော့ နားရှက်တာတွေကို အသာဘေးချိတ်ပြီး သူတို့ပြောသမျှ နားထောင်ရတာပေါ့။ အဲဒီတော့မှ ကိုမြင့်သန်းနဲ့ ကျမ ကွဲကွာသွားရတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ကျမသိလာရတယ်။ သိလာရ ပေမယ့်လည်း ကျမကိုယ် ကျမ ထိမ်းသိမ်းတတ်တယ်လို့ ဂုဏ်ယူရပါတယ်..ရှင်။ သူတို့ကျတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘူး။ သူ့တို့ရည်းစားတွေနဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ရင်း ဘယ်လိုတွေ့ကြုံ ရတယ်ဆိုတာ အချင်းချင်း ပြောတဲ့စကားဝိုင်းမှာ ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ပြောနေတတ်တယ်လေ။ သူတို့ပြောနေ ကြတာကို အရင်းအတိုင်းပဲ ကျမ ဖောက်သည်ချ ရမှာပဲ။ ဒါမှ ကျမ ဘယ်လောက် နားရှက်ရသလဲ ဆိုတာပေါ့။ အဲဒီနေ့ စကားဝိုင်းမှာ သီတာက အရင်စပြောတယ်။ `မေလဲ့… ငါလေငါ နင်တို့ကို ပြောရအုံးမယ်… သိလား ဟိုနေ့က ကိုကိုလေ ငါ့ကို သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ဖို့ခေါ်တာ ငါသွားတယ် သိလား “ဒီတော့ နင့်ကိုကိုကိုက ဘာလုပ်လွှတ် လိုက်သလဲ“ မေလဲကလည်း နင့်မောင်လို မဟုတ်ဘူးနော် ကိုကိုက ငါ့ကို ကိုင်ရုံ ကိုင်တာပါ“ ဘယ်လို ကိုင်တာလဲ… ပြောပြပါအုံး ငါ့မောင်ကကော ဘာလုပ်လို့လဲ “အောင်မာ… မေလဲ့ရာ… ငါမသိဘူးများ အောက်မေ့လို့လား… နင်တို့ ပန်းခြံထဲမှာလေ ညမိုးချုပ်မှ ပြန်လာတာ… အဲဒီနေ့က ဆရာဆီ သွားမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာတာ မဟုတ်လား သီတာနော်… အဲ့နေ့က ကိုင်ရုံ၊ နှိုက်ရုံပဲ လုပ်တာပါ…၊ တည်းခိုခန်းကျမှ ကဲတာ “ဟယ်… ပေါ်ပြီ… ပေါ်ပြီ… မေလဲ့တို့ ရိုးတယ် ရိုးတယ်နဲ့ တည်းခိုခန်းတောင် ရောက်ဖူးသွားပြီ… “နင်ကလဲ တစ်ခါတည်း ပါဟယ်“ အဲဒီ တစ်ခါတည်းက ဘာတွေ လုပ်တာလဲ… ငါ့ကိုပြောပြရမယ်…နော် “အင်းပါ… နင်ကလဲ နင့်ကိုကို ဘာတွေလုပ်သလဲ အရင် ပြောပြဟာ“ အင်းပါ….ငါပြောပြီးရင် နင့်အလှည့်နော်… မေလဲ့ “အေးပါ ပြောပြပါ့မယ်“
နင်တို့တစ်တွေကလည်း ဟယ်… ငါတစ်ယောက်လုံး ရှိနေတယ်လို့တောင် မထင်တော့ဘူးလား… ငါစိတ်ဆိုးလိုက်မှာ…နော်… “ဟုတ်ပါတယ်ရှင်…၊ ကျမမှာ သူတို့နှစ်ယောက် စကားနိုင်လုပြီး ပြောနေကြတာကို ကြားရပြီးကထဲက နားရှက်လာပါတယ်..။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ ကျမရှိသည်ဟုပင် မထင်ပဲ ပြောချင်ရာပြော နေကြတာ မဟုတ်လား..။ ကျမ မနေနိုင်တော့ပဲ ရပ်ဖို့ ပြောရပါတော့တယ်..။ ကျမ စိတ်ထဲမှာတော့ သူတို့ပြောစကားကို ဆက်ပီး နားထောင်ချင် နေတာပေါ့…။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ရှက်စိတ်ကလေး ဝင်လာလို့ အသာနေရတာပါ..။ သီတာ တွေ့လား…ဇင်ဇင်တစ်ယောက် ငါတို့လို မခံစားဖူးတော့ စိတ်ဆိုးမယ် လုပ်နေပြီ… `ဟုတ်တယ်….မေလဲ့ရေ..၊ ငါတို့တစ်တွေ ဇင်ဇင့်ကို ဇာတ်သွင်းပေးရမယ်…. `မဟုတ်က ဟုတ်ကဟယ်… “ဟုတ်ပါတယ်… ဇင်ဇင်ရဲ့…၊ ငါအရင် စပြောမယ် သိလား..။ ဒါက အချင်းချင်းတွေပဲ သိထားရမယ့် ကိစ္စပဲ…။ ဒါမှ နင်ရည်းစား လိုချင်စိတ် ပေါ်လာမှာ… “အေးပါ… သီတာမရယ်… ပြောမှာသာ ပြောစမ်းပါ…၊ ဇင်ဇင်တစ်ယောက် ငါတို့အပြောနဲ့တင် ရည်းစားထားချင်စိတ် ပေါ်လာမှာ… “အဲဒီလို ကစလို့ သီတာပြောပြ သည်မှာ သူနှင့် သူ့ကိုကိုတို့ သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ပြီး သူ့ကိုကိုနှင့် သူတို့ အနမ်းတွေ ပေးကြကြောင်း၊ အနမ်းတွေ ပေးပြီးနောက် သူ၏ နို့တွေကို သူ့ကိုကိုက ကိုင်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်မွှေကြောင်း..။ သူမလည်း အားကျမခံ သူ့ကိုကိုရဲ့ လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ပေးပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတဲ့ အကြောင်း..၊ သူ့ကိုကိုက သူ့စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်မွှေတော့ သူ့မှာ အရမ်းဖီလင်တွေ တက်ပြီး နှစ်ခါတောင် ပြီးသွားရကြောင်း..၊ သူ့ကိုကိုမှာလည်း သူက လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးလို့ သူ့ကိုကို လီးတန်ကြီးမှ အရည်များ ထွက်သွားကြောင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သမျှတွေကို စီကာပတ်ကုံး အကုန်ပြောပြပါတယ်..။ သီတာက အဲဒီလိုပြောပြ အပြီးမှာ မေလဲ့ကလည်း အားကျမခံပင် ပြောပြသည်မှာ သူနှင့် သူ၏ မောင်တို့ ပန်းခြံထဲမှာ တွေ့ကြစဉ်က သီတာပြောသလို နို့ကိုင်၍ စောက်ဖုတ် အနှိုက်ခံရကြောင်း၊ သူ့မှာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရည်များ လျှံထွက်အောင် ကောင်းရကြောင်း၊ သူ၏ မောင်ကိုလည်း ဂွင်းတိုက်ပေးရာ သူ့မောင်ရဲ့ လီးကြီးမှ သုတ်ရည်များ ထွက်၍ ပြီးသွားကြောင်းများ၊
သူတို့နှစ်ယောက် အားမရသဖြင့် နောက်နေ့တွင် ကျောင်းလစ်ပြီး တည်းခိုခန်းသို့ သွားကြကြောင်း၊ တည်းခိုခန်းတွင် သူ့စောက်ဖုတ် လေးထဲသို့ သူ့မောင်မှ လီးတန်ကြီး ထိုးထည့်ပြီး လိုးရာတွင် အရမ်းအရသာ ရှိကြောင်း၊ ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိုက်သလဲဆို ဘာနှင့်မျှ မလဲနိုင်အောင်ပင် ဖြစ်မိကြောင်း နောက်ထပ်တစ်ခါ တွေ့ဖို့လည်း ချိန်းလာခဲ့ကြောင်း များကို အားရပါးရပင် ဖောက်သည်ချ ပြောပြပါတယ်..။ ဒါနဲ့ နင့်မောင်ရဲ့ လီးကြီးက ဘယ်လောက်တောင် ရှိသလဲ ရှိတာပေါ့.. ငါ့ရဲ့ လက်တစ်ကိုင် ဆုတ်လို့တောင် မရဘူးဟဲ့… သိလား..၊ ငါ့မှာ ခံလို့ ကောင်းလိုက်တာ ငါ့စောက်ဖုတ် လေးလည်း ကွဲတောင်သွားတယ်…၊ အခုမှ အနာသက်သာသွားတာ..၊ နင့်ကိုကိုရဲ့ လီးကကော ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ ငါ့ကိုကိုရဲ့ လီးက တော်တော်တော့ ကြီးတယ်..၊ နင့်လိုပဲ… ငါ့လက်နဲ့ မဆုတ်မိဘူး နင်တို့ကလဲ… တော်ကြပါတော့ဟယ်…. ငါ့မှာ နားထောင်ရင်းနဲ့ ကျောထဲစိမ့်ပြီး ကြောက်လာပြီ တော်ပါတော့ ငါပြန်တော့မယ် အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ဇင်ဇင်ရယ် ငါတို့လဲ ပြန်မှာပါ ကျမမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ပြောနေသံ ကြားရတာနဲ့တင် ရင်ထဲမှာ ကတုန်ကရင်ကြီး ဖြစ်လာရပါတယ်..။ အာခေါင်တွေလည်း ခြောက်လာတယ်..။ ဆက်ပြီးတော့ နားမထောင် ရဲတော့ဘူး…။ ဒါနဲ့ စကားပြတ်အောင် မနည်းလုပ်ပြီး ပြန်လာခဲ့ ရပါတယ်..။ ကျမကသာ အဲ့လို စကားမဖြတ်ရင် ဘယ်လောက်ထိများ ပြောနေအုံးမလဲ မသိပါဘူး ရှင်..။ အဲဒီညက ကျမမှာ အိပ်လို့မရအောင် ဖြစ်နေရပြီး စောက်ပတ်လေးကို ကိုင်မိပါတယ်..။ ပြီးတော့ လက်ညှိုးလေးနဲ့ အခေါင်းထဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်မိတော့မှ ကောင်းတဲ့အရသာ ဆိုတာ ဘယ်လိုလည်း သိလိုက်ရပါတယ်…။ ကျမဟာသီတာနဲ့ မေလဲ့တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှင်းလင်းပွဲတွေကြောင့် ကျမမှာရှိတဲ့ ရမ္မက်စိတ်ရိုင်းတွေ ထကြွလာခဲ့ရပါတယ်..ရှင်..။ သီတာနဲ့ မေလဲ့တို့လို အတွေ့အကြုံရဖို့ ရည်းစား တစ်ယောက်လောက် လိုချင်နေမိ တာတော့ အမှန်ပါပဲရှင်..။ အဲဒီလိုနဲ့ သီတာတို့ ပြောစကားကို ကြားရပြီး တဲ့နောက် ကျမ ရည်းစားတစ်ယောက် လိုချင်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကိုကျော်စိုးနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတာပါ ရှင်…။ ကိုကျော်စိုးက ကျမတို့အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်ကျော်မှာ နေတာပါ..။ ကျမတက္ကသိုလ် တက်စနှစ်တွေမှာ ကိုကျော်စိုးရဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အသွားအပြန် လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့..။ ကိုကျော်စိုးက ဆိုင်ကယ်ဖယ်ရီ ဆွဲတယ်လေ..။
ဘွဲ့ရပြီးကတည်းက သူများတွေလို အစိုးရအလုပ် လခစား ဝင်မလုပ်ပဲ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ဝယ်ထားပြီး ခရီးသည် အပို့အကြို လုပ်တယ်လေ..။ အဲဒါကြောင့် ကျောင်းတက် နောက်ကျတဲ့ အခါမျိုး၊ ကျောင်းပိတ်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ကိုကျော်စိုးပဲ အပို့အကြို လုပ်ခိုင်းရတာပါ..။ ကိုကျော်စိုးနဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးရတဲ့ အချိန်တုန်း ကတော့ ရင်ခုန်းခဲ့ မိတာတွေ ရှိတာပေါ့ရှင်..။ တက္ကသိုလ် သွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေဘာတွေ ရှောင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကျမက သူ့ကျောကို ဖိကပ်ပြီး ကြောက်ရွံ့စိတ်ကို ဖယ်ထုတ်မိပါတယ်..။ ကျမ ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အခါ တင်ပါးလွှဲထိုင်ပြီး စီးပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ သူ့ပုခုံးကိုတော့ ကိုင်ရတယ်..။ အဲဒီတော့ ကျမ နို့အုံကြီးတွေနဲ့ ကိုကျော်စိုးရဲ့ နောက်ကျောကို ထိမိဖိမိတာ တွေလည်း ခဏခဏ ဖြစ်တယ်..။ ကိုကျော်စိုးကတော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိဘူး..။ ကျမ ရင်ထဲမှာတော့ ကြည်နူးစိတ်တွေ ခဏခဏ ဖြစ်ရတယ်..။ တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ကိုကျော်စိုးက ကျမကို ချစ်ပါတယ်လို့ ဖွင့်ပြော လာပါတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ အနေကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်လို့ရယ် သီတာတို့ မေလဲ့တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ကြားရလို့ နားရည်ဝနေပြီး ဖြစ်တာရယ် ဆိုတော့ ကျမလည်း ကာမဆန္ဒတွေ ဖြေဖျောက် ချင်တာကြောင့် ကိုကျော်စိုးရဲ့ အချစ်ကို လက်ခံလိုက်တယ်..။ ကျမ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုကျော်စိုးကို ရင်ထဲအသည်းထဲက ချစ်နေမိတာလည်း ပါတာပေါ့ရှင်..။ ကိုကျော်စိုး အတွက်ဆိုရင် ကျမဘာမဆို လိုက်လျောဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီလေ…။ အချစ်စိတ်က တကယ်ပဲ ဆန်းကျယ်ပါတယ်..ရှင်..။ ကိုကျော်စိုးနဲ့ ကျမတို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြပေမယ့် ကိုကျော်စိုးက စည်းကမ်းတော့ ရှိတယ်ရှင့်..။ ကျမကို လက်ကလေးကိုင်၊ ပါးလေးနမ်းရုံ ကလွဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းလဲ မနမ်းဘူး ။ တစ်ခြား ကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တွေကိုလည်း မထိမကိုင်ဘူး..။ အရုပ်ကလေး တစ်ရုပ်ကို အလှကြည့် ထားသလိုမျိုး ကျမကို ဆက်ဆံပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ မရပါဘူး..။ ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ အခါမှာ ကိုကျော်စိုးခါးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖက်ပြီး ကိုကျော်စိုးရဲ့ ကျောကိုမှီပြီး စီးတယ်လေ..။
အဲဒီလိုဆိုတော့ ကျမရဲ့ နို့အုံကြီး နှစ်လုံးက သူ့ရဲ့ ကျောမှာ အိပြီး ထိတွေ့မိ နေတာပေါ့..။ ကျမမှာသာ အဲ့လို ထိတွေ့လို့ စိတ်လှုပ်ရှား နေပေမယ့် သူကတော့ ကျောက်ရုပ်ကြီး လိုပါပဲ ခံစားမှုမရှိတဲ့ အတိုင်း မသိသလို လုပ်နေတယ်..။ ကျမမှာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုကျော်စိုးဆိုတဲ့ လူဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်မှ ဟုတ်ရဲ့လား လို့တောင် တွေးထင်မိပါရဲ့…။ အရင်က ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်းစားတွေနဲ့တော့ ကွာလိုက်တာရှင်..။ ကျမကိုယ် ကျမလည်း အံ့သြမိတယ် ရှင့်..။ ကျမရဲ့ ရှက်ကြောက် စိတ်တွေဟာ ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲ လို့တောင် တစ်ခါတစ်ခါတော့ ပြန်တွေးမိတယ်ရှင့်..။ ဒါပေမယ့် အခုဆို ကျမမှာ အတွေ့အကြုံ သစ်တွေ တော်တော်ကိုမှ တိုးနေပြီလေ…။ သီတာနဲ့ မေလဲ့တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ သူတို့ရည်းစားတွေနဲ့ ဆုံပြိး ကဲခဲ့ကြတာတွေ ကျမရှေ့မှာ ပြောပြခဲ့တာကြောင့် နားရည်ဝ လာတာလည်း ပါတယ်..။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ဘဲတွေက သူတို့ကို ပေးဖတ်တဲ့ ကာမဆက်ဆံ ပုံတွေကို တစ်တစ်ခွခွ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ..။ နောက်ပြီး သီတာတို့အိမ်မှာ စာသွားကျက်ရင်းနဲ့ နိုင်ငံခြား အပြာကား အခွေတွေလည်း ကြည့်ဖူးနေပြီ..။ အဲဒီအခွေတွေ ထဲမှာ လူမည်းကောင် ကြီးတွေနဲ့ လူဖြူမတွေ ပက်ပက်စက်စက် လိုးကြတာ တွေကို အရှင်းသား ရိုက်ပြထားတာလေ..။ အဲဒါတွေ ကြည့်ရတော့ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ စစ်ခနဲစစ်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရပြီး စောက်ခေါင်းထဲက အရည်ကြည်တွေ အတောမသတ်အောင် ထွက်ထွက်ကျ လာရတာ ကလည်း အခါခါပါပဲ ရှင်..။ အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့အခါ ကျမဟာ အိမ်သာထဲ ကမန်းကတန်း ပြေးပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီး လက်ညှိုးနဲ့ အသွင်းအထုတ် လုပ်ရင်း စိတ်ဆန္ဒတွေ ဖြေဖျောက် ရတော့တာပေါ့..။ ကျမရဲ့ ကာမဆန္ဒတွေ ပြင်းပြထက်သန် လာရတာကို ကျမကိုယ် ကျမ အသိဆုံးပါပဲ..။ စိတ်ထဲက ကိုကျော်စိုးရဲ့ အလိုးကို တောင့်တနေမိ ရတာကလည်း ခဏခဏပါပဲ..။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုကျော်စိုးရဲ့ အလိုဆန္ဒ မှန်သမျှကို လိုက်လျော တော့မယ်လို့လည်း ဆုံးဖြတ်ထားမိတဲ့ အထိပါရှင်။ အပိုင်း၂ ဆက်ရန်